ကျောင်းလမ်းနားက ယာဉ်တိုက်မှု (ရန်ကုန် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကျောင်းလမ်းနားက ယာဉ်တိုက်မှု (ရန်ကုန် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်)
ကျောင်းလမ်းနားက ယာဉ်တိုက်မှု (ရန်ကုန် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်)
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Jul 16, 2011 in Myanma News, News | 40 comments
အ/၂၁၁၆ ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးသည် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းပင်လုံလမ်း မ ကြီးပေါ်၇ှိကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်အနီးအင်းဝဓါတ်ပုံဆိုင်ရှေအရောက်တွင်လက်တွန်းလှည်းဖြင့် သစ်ချသီးလှော်
သနားဘို့ ကောင်းတယ် ဗျာ သတင်းရရခြင်း တင်လိုက်တာပါ ဒီနေ့နေ့လည် ၁နာရီကမှ ဖြစ်သွားခဲ့တာ
အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးတာပါ.. ပို့ကတော့ တက်သေးဘူး သူကြီးက စစ်တုန်းနဲ့တူတယ် ကြာလိုက်တာ
သတင်းက ပုံပါတော့ ပိုပီပြင်သွားတယ်။
အပြည့်အစုံက အင်တာနက်ဆိုင်ကထွက်ပီးတော့ သစ်ခြသီးဝယ်စားတာခင်ဗျ သူနဲ့အဖေါ်ပါလာတဲ့ကောင်မလေးကတော့လွတ်သွားတယ်.. ဈေးရောင်းတဲ့လူလည်း ရေထဲကိုဆင်းပြေးတယ်.
သူကတော့ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းတာကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ ကံဆိုးသွားတာပါ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တစ်ယောက် အရွယ်ကောင်းလေးနဲ့ ကြွေရရှာပီပေါ့ဗျာ :'(
မိန်းကလေးရယ် အဲဒီ သစ်ခြသီး သားဝယ်မစားခဲ ရင်
သနားလိုက်တာ။ မိဘတွေတော့ ရင်ကွဲပါပြီ။ ဘယ်လိုမှ ဖြေလို့ရမယ်မထင်ဘူး။ ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
အလောင်းကို တစ်ခုခုနဲ့ အုပ်ထားပေးသင့်တယ်
မြင်တွေ့ ရတဲ့သူတွေအဖို့ လည်း မကောင်း၊ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း(အသက်မရှိပေမယ့်လည်း)
သက်ဆိုင်ရာ လာစစ်တော့မှ ဖွင့်ပြီးကြည့်ပါစေပေါ့။
ဒီ မလေးရှားမှာဆိုရင်တော့ အက်ဆီးဒင့်တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့အလောင်းကို သတင်းစာနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အုပ်ထားပေးကြတယ် သက်ဆိုင်ရာလာစစ်ပြီး အလောင်းကိုသယ်သွားပြီးတာနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သွေးတွေကို ရေနဲ့ ဆေး၊ စပါးခွံ သို့ မဟုတ် လွှစာမှုန့် နဲ့ ဖြူးပြီး လှဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ်
ဘာဖြစ်လို့.. ဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလောင်းကို ဒီလိုပစ်ထားရသလည်း.. စဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ကိုဖြစ်မိတယ်..။ လူတွေမှာ လူသားကျင့်ဝတ် အခြေခံလေးတောင်ကျန်သေးရဲ့လား မေးခွန်းထုတ်နေမိတော့တာပါပဲ..။
ကျုပ်ကပဲ… မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာတရားအဆုံးအမ ဆိုတာတွေကို သံသယတွေများလွန်းလာသလားမသိ..။
ဟုတ်တယ် သူကြီးရာ… မြင်ရတာ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ဘူး၊ လူမြင်ကွင်းကြီးမှာ…
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မသိမသာ စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျ လာသလိုပဲ၊ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကြောက်တရားတစ်ခု စိုးမိုးနေတာကြောင့်လဲ ပါသလိုပဲဗျာ…
တစ်ခုခုနဲ့ ဖုံးကွယ်ပေးချင်တဲ့သူ ရှိနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ငါ့ကို အမှုများလာပတ်နေမလား၊ ငါ တစ်ခုခုများ ဖြစ်လေမလား ဆိုပြီး ဘာကိုမှန်းမသိ ရေရာသေချာမှုမရှိတဲ့ တွေဝေစိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်သာ ဒီမိန်းကလေးရဲ့အလောင်းဟာ လူမြင်ကွင်းကြီးမှာ အချိန်တော်တော်ကြာ ရှိနေခဲ့တာပါ… မြန်မာအများစုဟာ ကူညီချင်စိတ်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာမှန်းမသိ၊ ညာမှန်းမသိ ကြောက်နေတဲ့ စိတ်ကလဲ ရှိကြပါတယ်…
အဲသည်တော့ ဘယ်အချိန်လာမယ်မှန်း မသိတဲ့ ရဲကိုမျှော်မယ်၊ ဆေးရုံကားကို မျှော်မယ်၊ ပြီးရင် ထင်ကြေးတွေ စွတ်ပေးပြီး အချင်းချင်း ဟိုနားက ရပ်ကြည့်၊ ဒီနားက ရပ်ကြည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း သတင်းပေးလုပ်မယ်၊ သတင်းရော၊ အတင်းရော ပြောမယ်၊ ရဲနဲ့ပတ်သတ်ရမှာ၊ သက်သေလိုက်ရမှာ ကျတော့ တော်ရုံသတ္တိနဲ့ မလိုက်ချင်ကြဘူး…
ဘာပဲပြောပြော လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ပေးချင်တဲ့ စေတနာထက် တွေဝေစိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်တွေက ပိုများနေတော့ အခုလို မြင်တွေ့နေရတာ ပါပဲဗျာ…
Accident ဆိုတာကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမဆို ဖြစ်တတ်တာပါပဲ… ဘယ်သူ့အမှားကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ… ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်… အနားကလူက ဘာကိုတော့ဖြင့် လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့အသိ အားနည်းပြီး အမှုပတ်မှာ ကြောက်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေကတော့ ပြင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်….
မကူညီရဲလို့လား မကူညီချင်လို့လား မကူညီရလို့လား(ခွင့်မရလို့လား)
အဲလိုအက်စီးဒင့်မှာ မသေသေးပဲရှိနေတဲ့လူဆိုရင် အမြန်ဆေးရုံပို့သင့်တယ်
သေသေ မသေသေ ဒီလိုထားထားတာတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းဘူး
ပုံလေးက ကြည့်ရတာ သနားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ..
ပုံကြည့်ပြီး ကြက်သီးတောင် ထတယ်ဗျာ
ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ ဥပစ်စေဒက ကံ ပဲ။
ကိုယ်ပေါ်မှာ ကား ဘီးရာတွေနဲ့ ။ တိုက်တဲ့ အပြင် တက်ကြိတ်သွားတာပဲ။
တိုက်လိုက်ရင် မှောက်လိုက်ရင် BM တွေပဲ။ အဲဒီကားတွေက လေးတွေကို မတရားပိုး ၊ ဘော်ဒီကို မတရားမြှင့်၊
ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ဘေးတိုက်တွန်းရင် လဲ မဲ့ ပုံစံတွေ။ မောင်းတဲ့ ကောင်တွေကလဲ အကွေ့ တွေ မှာ Speed ဘယ်လောက်
တင်ရင် မှောက်နိုင်တယ် ဆိုတာကို လုံးဝ မသိတဲ့ ပြိုင်ကားလို့သဘောထားပြီး မောင်းတဲ့ ကောင်တွေ။
စက်ရုံ ဖယ်ရီတွေဆို ခဏခဏမှောက်ပြီး မကြာခဏသေကြတယ်။
မြန်မာပြည်မှာက ယဉ်ကျေးမှုက ရှေးခေတ် လူရိုင်းသာသာ လောက်ပဲ အသိဥာဏ် ရှိတော့တယ်။ ဓါတ်ပုံထဲက အလောင်းနဲ့ 
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ပုံစံတွေကို ကြည့်ရတာ ခွေးတစ်ကောင် ကားတိုက်ပြီး သေတဲ့ သဘောထားလား မသိဘူး။
ဒါဟာ ကံနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ သေမဲ့ကံပါလို့သေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က လူတွေရဲ့အသိဥာဏ် ချို့ တဲ့ လာမှုကြောင့်ပါ။
ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်က စီးခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်တွင်းအကျန် ဂီယာ တုတ်ထောက် Bus တွေကို မြန်မာတွေ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဘယ်လိုမှ မမြင်ဘူးလေ။ အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ မမြင်ကြတော့ဘူး။ ကျားကို မမြင်ဘူးတဲ့လူက ကျားကိုကြောက်တယ်။
ဝေးဝေးရှောင်တယ်။ မြင်တာနဲ့ ပြေးမယ်။ ကြောက်ရမှန်း အန္တရာယ် ရှိမှန်းသိတယ်။ ကျားနဲ့ယဉ်နေတဲ့ လူတွေက ကြောက်ရ
ကောင်းမှန်း အန္တရာယ်ရှိမှန်း မသိတော့ဘူး။
လမ်းတွေဖောက်တယ်ဗျာ။ လူသွားလမ်း(Platform) မပါဘူး။ လူတွေ အတွက်ကို ထည့်မစဉ်းစားဘူး။ လူသွားလမ်း မပါတဲ့
ကားလမ်းဟာ ဟိုင်းဝေးလမ်းပဲ ရှိတယ်။ အခုတော့ မြန်မာပြည်က မြို့ တွင်းကားလမ်းတွေ (အသစ်ဖောက်တဲ့လမ်းတွေ) ၉၀%
လူသွားလမ်း မပါဘူး။ အစွန်အဖျားဘက်တွေမှာဆိုရင် ကားလမ်းပေါ်မှာ လူတွေ၊ခွေးတွေ၊ ကျွဲနွားတွေ ကားတွေ ဟာ ကားလမ်း
မ ပေါ်မှာပဲ ဒွေးရောယှက်တင် ဘုံ နေရာကြီးကို ဖြစ်နေတာ။ လူသွားလမ်းပါမယ်၊ ကားလမ်းမပေါ်မဆင်းအောင်ကြိုးတားထားမယ်
ဆိုရင် လူတွေက ကားလမ်းပေါ်မှာ မလျှောက်ဘူး။ အခုတော့ အလွန်ကို ညံ့ဖျင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်မျိုးလို လမ်းတံတား အင်ဂျင်နီ
ယာတွေ Project ရတဲ့ လူတွေ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတွေ အားလုံးဟာ ပညာသည် စည်း ကို မစောင့်ထိမ်းကြဘူး။
အိမ်သာတော့ ဆောက်လိုက်တယ် ကျင်း မတူးထားသလိုပဲ။ အဲဒီ လမ်းတံတားစီမံကိန်းမှာ မြို့ တွင်း ကားလမ်းတွေမှာ
လူသွားလမ်း ပလက်ဖောင်း မပါအောင် ဘယ် မအေလိုး ခွေးမျိုး အင်ဂျင်နီယာတွေက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြတာလဲ။
အစိုးရက ဘတ်ဂျတ် ဒီလောက်နဲ့ရအောင်လုပ် ဆိုရင်တောင်မှ အဲဒီ အင်ဂျင်နီယာတွေက ပညာသည်ကျင့်ဝတ်ကို
စောင့်ထိမ်းရမယ် မဟုတ်လား။ ကားလမ်းရှိရင် အနည်းဆုံးတော့ လူသွား ပလက်ဖောင်းတော့ ထည့်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ရမှာ
အခြေခံပဲ မဟုတ်လား။ ကျုပ် နေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ လူမပြောနဲ့တိရိစ္ဆာန် သွားဖို့ တောင် လမ်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဆိုတော့….လူတွေက သွားစရာလမ်း မရှိတော့ ကားလမ်းပေါ်တက်လျှောက်တယ်။ လူရော တိရိစ္ဆာန်ရော ။ ဈေးသည်တွေက
လဲ ကားလမ်းမပေါ်ကနေ ဈေးတက်ရောင်းတယ်။ အန္တရာယ်ကို ယဉ်သွားတော့ အန္တရာယ်လို့မမြင်ကြတော့ဘူး။
လူတွေ အားလုံးက မိမိ တဦးချင်းစီရဲ့စောင့်ထိမ်းရမဲ့ ကျင့်ဝတ်အားလုံးကို ချိုးဖောက်ကြတယ်။ အစိုးရကလဲ အစိုးရ အလျှောက်
ပညာသည်တွေကလဲ ပညာသည်တွေ အလျှာက်။ ကားမောင်းသူတွေကလဲ ကားမောင်းသူတွေ အလျှောက် ။
ဘယ်သူကမှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ ဆိုတဲ့ အသိပညာတွေ လုံးဝ မရှိကြတော့ဘူး။ ပြည်သူ့ နီတိ လူ့ ကျင့်ဝတ်တွေ တကယ်ကို
မရှိကြတော့ဘူး။ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးသူတွေ မတရားများလာပြီ။ တော်တော်ကို စိတ်မကောင်းပါ။ လူတစ်ယောက် ကားလမ်း
ပေါ်မှာ တိရိစ္ဆာန် သေ သလို သေသွားပါတယ်။ အသက်ရှိနေတဲ့ လူတွေကလဲ ဒီတိုင်း တိရိစ္ဆာန် သေသလို ပစ်ထားပါတယ်။
လမ်းဘေးမှာ ပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်ဗျ.. နေပြည်တော်မှာလေ
အပေါ်ကဆရာကြီးက အခြားအကြောင်းတွေပါ စုံစုံလင်လင်တင်ပြသွားတဲ့အတွက်
တွန်းလှဲဆိုတာ ဘီးတောင် တစ်စစီဖြစ်သွားတယ်
စသည် စည် သတိထားစရာတွေ ရှိလာမှာပါ
ယ္ခုသတင်းအေရဆိုရင် ကားလိုင်စင်ကို သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
နောင်ဘယ်လို ကာကွယ်သင့်သလဲဆိုတာတွေပါ နားလည်ကြရမယ်လို့တော့ ထင်မိပါတယ်
အထူးသဖြင့် သတင်းတစ်ခုကို အချိန်မှီတင်ပြပေးနိုင်တဲ့
( သူများသုက္ခရောက်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်တာဟုတ်ဘူးနော် သတင်းရဲ့သဘောအရပါ )
မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြွေကွဲရပါတယ်။ဒီအဖြစ်မျိုး ဘ၀ဆက်တိုင်း မတွေ့ ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အခြေနေတော်တော် ဆိုးတာပဲ သနားပါတယ်ဗျာ
လူငယ်မျိုးဆက်သစ် တစ်ယောက်တော. ကြွေပြီဗျာ
ကောင်း၇ာ သုဂတိေ၇ာက်ပါစေ။
I thought how her parents feel
So hard for them
စိတ်မကောင်းစရာ…။ ခွေးသား သေဒဏ် မဟုတ်ဘူး ..။ နေရာတင်သတ်ပစ်သင့်တယ်..။ မမိသေးဘူးလား..။
Al least he should not run and face to the court
သူကြီး intro နှင့် အလောင်းကို ဖုံးအုပ်မပေးတာကို ပစ်ထားတာကို မချင့်မရဲဖြစ်သော ရွာသားများထဲတွင် ကျွန်တော်လဲအပါအ၀င်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို case မျိုးမှာ ပြဿနာဖြစ်မှာစိုးလို့ သာမန်လူတွေက ဘယ်သူမှ မထိရဲ အနားမကပ်ရဲပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီနားက အနီးဆုံး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ရာအိမ်မှူးတွေ လူစိတ်မရှိတာပါ။
chityaaung ….ရေ…။ အဲဒီဒရိုင်ဘာ ဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ကိုပြန်မိသွားရင် ချုပ်ထားမယ်။ ရဲကလူသေမှု့နဲ့ တရားစွဲမယ် ၊ ယာဉ်မှု့စစ်ကမဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှုနဲ့တရားစွဲမယ်။ ယာဉ်မှု့စစ်ကို ဂါ ပြီး ဘရိတ်ပေါက်တာ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ သေသူရဲ့ မိဘတွေကိုဝင်ပြီး ငွေကြေးကမ်းလှမ်းမယ်။လိုင်းကားမို့ အများဆုံး၁၀သိန်း။ ၂သိန်းကစပြီးဈေးဆစ်မယ်။ တနေရာရာမှာ တည့်သွားပြီး မိဘက ကျေနပ်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်မယ်။ မထိုးပေးရင် ရပ်ကွက်လူကြီးကိုပူးပြီး နားချမယ်။ယာဉ်မှု့စစ်အစီရင်ခံစာနဲ့ မိဘ ကျေနပ်ကြောင်းပါရင် တရားသူကြီးက လျှော့လို့ရသွားပြီ။ တရားစွဲအရာရှိကို ၀င်ထားမှာမို့ စွဲချက်ကလဲ လျော့တိလျော့ရဲ ဆိုတော့ …..။
သိပ်မကြာခင် အဲဒီဒရိုင်ဘာ အဲဒီကားမျိုး ပြန်မောင်းဦးမှာ …။
Someone should make changes
မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ … အ ချိန်နဲ့ တပြေးညီမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်နော် ။
လဲနေတာ ရောင်းတဲ့လူလား … ၊ ကျောင်းသူလား … ။
မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အပြစ်ကို ခံရမှာပေါ့ မမိမှာလဲမဟုတ်ပဲနဲ….
အဲလိုကောင်တွေ အများကြီးနော် ဘက်စ်ကားမောင်းနေကြတာ…
မိရင် ပို.စ်တင်ပေးကြပါအုံး.. စကားနဲ.ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြစ်ပြစ်နစ်နစ် ပြောချင်လွန်းလို.
စိတ်မကောင်းစရာဘဲဗျာ .. ကောင်မလေးခမျာ သနားပါတယ် …. တိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့ ….. ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ်ဝန်မခံရဲတဲ့ လူပဲ … ရန်ကုန်မှာကားတွေက အရမ်းပေါပြီး အရမ်းမောင်းတယ် လိုင်းကားတွေပိုဆိုးတယ် ကားပေါ်မှာ ပြည်သူတွေအများကြီးပါတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ထင်တိုင်း မောင်းနေတော့တာ … ဖြည်းဖြည်းမောင်းကြပါ …. သင့်ကြောင့် ဘာမှမဆိုင်တဲ့ သူတွေ သေကုန်တော့မယ် ….
အလောင်းကိုတော့ နီးစပ်ရာလူတွေက တစ်ခုခုနဲ့ အုပ်ပေးထားသင့်ပါတယ် … အများပြည်သူ မြင်မကောင်းစရာတွေပါ ….. တစ်ချို့ကလည်း သွားအုပ်မိရင် ရဲက မေးလားမြန်းလား လုပ်မှာစိုးလို့နဲ့တူတယ် … ၁၅ ၇က်နေ့လည်း မနက်ခင်း 53း0 လောက်ပဲရှိဦးမယ် မန်းတလေးမှာ ပုလိပ်မြို့ မရောက်ခင် ပေါ်တော်မူဘုရား မုဒ်ဦးရှေ့ အဝေးပြေးလမ်း ညာဘက် လမ်းလည်ခေါင်မှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လူတစ်ယောက်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေလားရှင်လား မသိဘူး … သွေးတွေကတော့ အများကြီးပဲ …… ဘယ်ဘက်ကအဝေးပြေးလမ်းလည်ခေါင်မှာလည်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီး နဲ့ လူတစ်ယောက် သူကတော့ အသက်ရှင်သေးတယ် လမ်းဘေးမှာ လူတွေနဲ့စကားပြောနေတယ် … ဆိုင်ကယ်ကတော့ စုက်ပျက်နေပီ …. ဆိုင်ကယ်ချင်းပဲတိုက်တာလား .. တစ်ခုခုကပဲတိုက်သွားတာလားဆိုတာ မသိဘူး ….. ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်တာဆိုလည်း အရှိန်ကအရမ်းပြင်းမှာပဲ ဘယ်ညာ လွင့်ထွက်သွားတာ တော်တော်ဝေးတယ် … သိရင် သတင်းလေးအပြည့်အစုံတင်ပေးကြပါ … အဲဒီနားမှာ ရဲတွေတစ်ယောက်မှလည်းမရှိဘူး … တစ်ဘက်ကလူနားမှာတစ်ယောက်မှလည်း မရှိကြဘူး … တစ်ဘက်မှာလည်းသုံးယောက်ပဲရှိတယ် .. မလိုအပ်ဘဲ အရှိန်ပြင်းပြင်းမမောင်းကြပါနဲ့ ……..
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ အသက်က (19) နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ မိဘတွေတော့ ရင်ကျိုးမှာပဲ
မိဘတွေတော ရင်ကျိုးရမှာပဲ စိတ်မကောင်းစရာပါ
သစ်ချသီးရောင်းတဲ့သူကရော .. ဟိုတစ်လောကလည်း ပန်းဆိုးတန်းဘက်မှာ ကလေးကတော်တော်ငယ်သေးတယ်တဲ့ ဟိုဘက်လမ်းပြေးကူးတာ … သူ့အမေ က နောက်ကပြေးလိုက်တာ ကားကတိုက်ပြီး လူပါတက်ကြိတ်သွားတာတဲ့ … ကြောက်စရာကြီး …
သူကြီးပြောတာမှန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို.မြန်မာလူမျိုးတွေ ကူညီချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ. မကူညီရဲဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒီိစိတ်ကလည်း တော်တော်နဲ.မပျောက်နိုင်သေးပါဘူး ကိုယ်မပါဘူး အမှုပတ်မှာ
တရားခံလည်းမြန်မြန်မိပါစေ အဂတိ မလိုက်စားတဲ. ရှားပါးဝန်ထမ်းနဲ.တွေ.ပါစေ
အဂတိကျူးလွန်၊ မိန်းမလိုက်စား၊ ရှားပါးဘိုင်ကျနေတဲ့ ဝန်ထမ်းနဲ့တွေ့ပါစေဆိုတော့… နင့်ဟာဘာကျန်သေးလဲ
အစိုရအနေနဲ့ လိုင်းကားတွေကို စည်းကမ်းနဲ့အညီဖမ်းဆီးအရေးယူသင့်တယ်။အခုဟာက ပိုက်ဆံယူ ပြီး လွတ်ပေးနေကြတယ်။ဒီစာဖတ်တဲ့ထဲမှာလူကြီးသား၊သမီး ပါရင် မိဘကိုပြောပြပေး ကြပါ။